I-Blackmagic Design entsha ye-DaVinci Resolve Isihleli sekhibhodi Ikhulisa Ukuhlela Kwesivinini Kwabadali Lokuqukethwe | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-Blackmagic Design entsha ye-DaVinci Resolve Isihleli sekhibhodi Ikhulisa Ukuhlela Ijubane Kwabakhi Bokuqukethwe
I-Blackmagic Design entsha ye-DaVinci Resolve Isihleli sekhibhodi Ikhulisa Ukuhlela Ijubane Kwabakhi Bokuqukethwe
Okuqukethwe okwenziwe ngumqambi kufanele kube okuhlukile uma kuvezwa, ikakhulukazi lapho befinyelela izithameli. Okuqukethwe nohlobo lomsunguli olwesekelayo kufanele kube nendaba. Ngaso leso sikhathi, umakhi kufanele acabangele inani elikhulu lamathuluzi amaningi inkampani enjenge I-Blackmagic Design kungasiza ukubanakekela kumishini yabo ukuze bangagcini ngokwakha okuqukethwe okuhle kakhulu laphaya. Kodwa futhi nezithameli ezihamba phambili umkhiqizo wazo ongaxhumana nazo. Yilapho I-Blackmagic Design kuza esithombeni, futhi nesisha sabo Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli, ukudalwa kokuqukethwe kuzoba inqubo elula kakhulu yokuphatha abakhiqizi abanamakhono abaningi abasebenza embonini yezokusakaza.
Uma kukhona I-Blackmagic Design ukudala, ngaphandle komlingo, kungenye yemikhiqizo ephezulu kakhulu yokuhlela ividiyo esezingeni lomhlaba. Kulungile, kusukela ngo-2001, Inkampani yedijithali yedijithali ukhiqize imikhiqizo esukela
Izikena zefilimu zesikhathi sangempela
Yonke le mikhiqizo yenzelwe zombili ifilimu yesici, ukukhiqiza okwenziwa ngemuva, kanye nezimboni zokusakaza kuthelevishini. Isibonelo esisodwa se Imikhiqizo ye-Blackmagic Design ifaka amakhadi wayo wokuthwebula we-DeckLink, oqale kahle inguquko esezingeni nekhwalithi emhlabeni wokukhiqizwa. Lolu hlobo loshintsho luphinde lwakhonjiswa ngemiklomelo yenkampani i-Emmy ™ ewina imikhiqizo yokulungisa imibala ye-DaVinci, eye yanqoba imboni yethelevishini neyamafilimu.
I-Blackmagic Design ukusakaza okungapheli kokuqhekeka kwemvelo kufaka phakathi imikhiqizo ye-6G-SDI neye-12G-SDI, kanye ne-stereoscopic 3D ne I-Ultra HD ukuhamba komsebenzi. Futhi okusha Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli, indlela yabo yempumelelo entsha izoqhubeka kuphela.
I-Blackmagic DesignIkhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli
Ikhibhodi yesihleli se-Blackmagic Design sikaDaVinci Sombulula Isihleli kudlulela ngalé kwekhibhodi elula. Le ikhibhodi ethile yenziwe njengedivaysi yokuhlela ehlukile, ekhulisa ijubane lokuhlela ngokushesha okukhulu kuneligundane. Empeleni, i Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli ingasiza abathengi ukusebenzisa ngasikhathi sinye izandla zombili ngasikhathi sinye, futhi ingabanikeza ukudayela okuhlanganisiwe okwakhelwe ngaphakathi kukhibhodi.
Ikhibhodi yesihleli se-Blackmagic sikaDaVinci Resolve Isihleli inomklamo oyinsimbi yonke, okuyinto eqinile ngokwedlulele futhi lo ngumphumela uma wenziwa kubahleli abangochwepheshe abasebenza izinsuku zabo ukuhlela amahora namahora, okungangabazeki ukuthi kungaholela ekufuneni isixazululo sekhibhodi ye-premium. Ngokungafani namakhibhodi amaningi wesimanje anezinkinobho ezifulethi, okhiye beKhibhodi banephrofayili ye-tiered, eyenza kube lula ukuthi umsebenzisi azizwe ezungeza. Ukushintshwa okhiye luhlobo olufanayo olusetshenziswa ngamakhibhodi eSports futhi ukhiye ngamunye uqinisekisiwe ngemisebenzi engaphezu kwesigidi. Ukudayela okuhlanganisiwe kokusesha kwenziwa kuminsimbi eqinile futhi kuvumela ukuqondisa kanye nokulawula okuqondile kakhulu. Futhi, izihluthulelo zezikhiye, ukuphumula kwesandla, kanye nezishintshi zokhiye konke kuyatholakala njengezingxenye ezisele, futhi ngaleyo ndlela ikhibhodi ingavuselelwa futhi ilungiswe ngokuhamba kwesikhathi.
The Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Editor ijubane libalulekile amakhasimende ukuze bakwazi ukusebenzisa zombili izandla lapho uhlela. Uma abathengi bafuna ukusebenzisa isandla sabo sokudla ukulawula isikhundla ngesiqeshana, ngenkathi isandla sabo sobunxele sisetshenziselwa amaphuzu nokusebenzisa okuhleliwe noma okuphambene nalokho, khona-ke akukho mingcele yekhibhodi yesimanje evimbela ukwenza kanjalo. Nge Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli amakhasimende anekhono lokuhambisa, ukumaka nokuphuma amaphuzu, afake isicelo sokuhlela, abese ehamba futhi, ephindelela, enye emva kwenye, kaninginingi.
Ukudayela okuhlanganisiwe kukhibhodi yinsimbi eyenziwe ngamatshe enhlanganisela irabha, okwenza kuzizwe kukuhle kakhulu ngabasebenzisi, futhi bayohlala bezizwa benokulawulwa okuqinile kwesiqeshana noma umugqa wesikhathi we-DaVinci. Kukhona futhi i-clutch kagesi ehlanganisiwe edala ukuma lapho isetshenziselwa i-shuttle nesikhundla, konke kungaphansi kokulawulwa kwesoftware. Ngama-roller bear amaningi, ukudayela kokusesha kuhamba kahle kakhulu futhi kungenziwa ku-spun mode jog ukuvumela umqulu wesikhathi wesikhathi.
Ikhibhodi Yomhleli ifaka nesakhiwo sekhiye obukeziwe we-qwerty, esivuselelwe sisebenzisa impendulo evela kubahleli abangochwepheshe. Ngaphandle kwalokhu, abasebenzisi basazokwazi ukufinyelela kuzo zonke izici zokuhlela zendabuko kuwo womabili amakhasi wokusika nokuhlela eDaVinci Resolve, ngakho ingxenye esemqoka yekhibhodi isasebenza ngendlela ejwayelekile. Zonke izindlela ezijwayelekile zokuhlela zifakiwe kukhibhodi enkulu. Kodwa amakhasimende asathola izici ezintsha kusakhiwo esibuyekeziwe, futhi lokhu kufaka inkinobho yokubuka esizovumela ushintsho olusheshayo ekubukeni kwesikrini esigcwele. The Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli yenza ngisho ukuthi ihlelwe ikhibhodi ukubukwa kwesikrini esigcwele
Ngokwengeza okunye ukuphawula kuzici zekhibhodi ye-DaVinci Resolve Isihleli sekhibhodi, I-Blackmagic Design Isikhulu esiphezulu uGrant Petty uthe: “Si cabanga ukuthi lo ngumkhiqizo omnandi kakhulu njengoba unezinto ezinhle kakhulu zomsebenzi. ” UPretty uqhubeke wathi “Sekuyiminyaka ukuhlela imigqa kuthathwa njengokwasendulo, futhi manje sesisebenzise lezi zinzuzo zokuhlela kokuqala kwamalayini okokuqala. Angikholwa ukuthi akekho omunye umuntu owake wacabanga ngalokhu ngaphambili futhi samangala ngesivinini esingakwenza ukuhlela lapho sisebenzisa izandla ezi-2 kwikhibhodi entsha yeDaVinci Resolve Editor! ”
Izici eziningana zekhibhodi ye-DaVinci Resolve Editor zifaka:
Idizayini yensimbi yonke yamandla akhuphukile
Inika amandla ukuhlelwa okusheshayo kunokunokwenzeka kusoftware ye-NLE
Ukulawulwa kokudayela okuhlanganisiwe
I-Source Source ivumela ukuseshwa kwesiqeshana ngokushesha
Izinkinobho zokwenza kabusha ama-bins kabusha
Izinkinobho ezinkulu ezingena nezangaphandle
Izindlela ezintsha zekhibhodi zokuhlela okukhaliphile
Izinkinobho zokuvumela ukudayela kokusesha bukhoma
Izinkinobho zokushintsha uhlobo lokuguqula
Ukwenza ngcono izinqamuleli zekhibhodi ze-DaVinci ezithuthukisiwe
Ikhiphedi yokufakwa kwe-timecode okuqondile
Ingafakwa emgodini osikiwe ku-edonsoles yokuhlela
Ngemininingwane engaphezulu kwikhibhodi ye-DaVinci Resolve Isihleli, vakashela www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/edit.
Kungani Uhamba Nakho I-Blackmagic Design
Ngaphezu kokuba nemikhiqizo ethile ephezulu kakhulu yokuhlela ividiyo, I-Blackmagic Design yenza nje ukuthi isipiliyoni se-cinema sithokozise kakhudlwana kubo bobabili abadali bokuqukethwe abasebenza embonini yokusakaza kanye nezithameli zabo. Akunandaba ukuthi umsakazi ufuna ikhamera yefilimu eyedijithali, abashintshi abasebenza ngezinto ezikhiqizwa bukhoma, noma ama-router asezingeni eliphakeme kuphela, ngeke babe nokudumazeka ngekhwalithi yomsebenzi we-stellar I-Blackmagic Design kukhiqiza njengengxenye yomsebenzi wayo wokusiza ukuqhakaza kweqiniso kuqhakaze.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe I-Blackmagic Design, vakashela www.
I-6G-SDI ne-12G-SDI I-Blackmagic Design imboni yokusakaza Abalungisi bemibala sokuqukethwe Ukudalwa kokuqukethwe Imikhiqizo yokulungisa imibala ye-DaVinci Ikhibhodi yesihleli se-DaVinci Resolve Isihleli Amakhadi wokuthwebula we-DeckLink Inkampani yedijithali yedijithali Amakhamera wefilimu weDijithali Ama-Disk rekhoda ifilimu Nikeza uPretty Izishintshi zokukhiqiza ezibukhoma ukukhiqizwa kokuthunyelwe Izikena zefilimu zesikhathi sangempela ama-routers izimboni zezokusakaza zethelevishini Abaguquli bevidiyo imikhiqizo yokuhlela ividiyo ukuqapha ividiyo Abaqaphi be-Waveform 2020-05-10
Ngaphambilini: Idizayini ebonakalayo ekude ne-Video Production Internship